Torohevitra 5 tsy maintsy fantatrao alohan'ny hisafidianana saosy soja-saosy saosy-NANTONG CHITSURU FOODS CO., LTD.
Fotoana: 2021-04-13 Hits: 43
We mety mampiasa ny soja isan'andro, fa ny sasany amintsika kosa tsy mahalala na inona na inona momba ny fisafidianana soja, anio dia avelao izahay hanolotra torohevitra vitsivitsy ho anao.
FIrst, mazava ho azy ny famokarana sy ny daty lany daty .
Second,Jereo ny fanondroana kalitao sy ny loko; ny saosy soja tsara dia hamorona bubble be rehefa ahetsiketsika, ary tsy mora ny manaparitaka azy. Afaka mamofona ihany koa ianao. Ny soja tsara dia mahery fofona .
Third,Jereo ny marika. Avy amin'ny ingredient ny soy sauce, azonao atao ny mamantatra hoe iza amin'ireo no saosy masirasira na saosy afangaro.
Fangano, napetraka ny mahandro sakafo tanjona mazava. Ny saosy soja dia tokony homarihina amin'ny fandrahoana na ny fandrahoana. Ny famantarana ny fahadiovan'ny roa dia samy hafa, ary ny index an'ny zanatany dia hafa ihany koa. Azo hanina mivantana ho an'ny fanarahana azy io, ary misy tondro tsara momba ny fidiovana. Raha ny fandrahoan-tsakafo dia tsy tokony ampiasaina amin'ny lovia mangatsiaka.
Fifth,Jereo ny loko. Ny lokon'ny saosy soja mahazatra dia tokony ho mena volontany, ary ny lokon'ny kalitao tsara dia ho somary maizina kokoa, fa raha maizina ny lokon'ny saosy, midika izany fa caramel mpanome loko is tafiditra ao.
Next: Ny tantaran'ny saosy soavaly